I-china abakhiqizi be-wiper ye-ESD Cleanroom nabaphakeli | Bei Te
1. Kulula ukuyisebenzisa, inezici zokuhlanzeka, akukho doti, amandla aqinile wokunwebeka nokumuncwa okuphezulu.
2. Kusetshenziswa kabanzi ukususa uketshezi nophethiloli ebusweni bebhodi lesifunda, ezimbonini ezisebenza ngogesi, ngokumunca okuphezulu, ukungaguquguquki okungekho lula, amandla okuqina aqine kuzo zombili izici eziqondile nezingqimba, amandla amahle kakhulu futhi alungele izixazululi ezahlukahlukene.
3.Kulungile ekuqedeni iminonjana yokungcola ezindaweni ezibucayi emkhakheni we-microelectronics, micro-mechanics, and pharmaceutical etc. It is a effective cleaning tool in the Cleanroom.
Izinto I-100% i-Polyester ne-carbon fiber
Isisindo 120gsm +/- 5gsm
Iphakheji 150pcs / isikhwama, 10bags / ctn
Usayizi 4 `` x4 '', 6 `` x6 '', 9 `` x9 '', noma usayizi wamakhasimende
Umphetho Laser cut noma ukusika kwe-Ultrasonic
Isitifiketi SGS Rosh
Surface ukumelana 10E6-10E9 ama-ohms
Amagama angukhiye womkhiqizo I-ESD Anti-static Wipers / ESD Cleanroom Wipers / lint free ESD Microfiber cleanroom wiper
1.I-absorbency enhle kakhulu, ayikho i-detergent edingekayo
2. Izinhlayiya eziphansi. Ukusula ngakunye kusebenza kokubili njengokusula okomile futhi kuhlangene neKhemistry yethu yokuhlanza.
3. Izici ezimanzi ezinhle kakhulu
4. Ideal for yokuhlanza imishini esetshenziswa SMT izinqubo
5. I-static dissipative ESD wiper yayo yonke inqubo yokukhiqiza ye-elekthronikhi nenqubo yokuhlanza i-optical.
Isisindo Sesisindo (+/- 5%)
Ubukhulu (+/- 0.05mm)
Isilinganiso sokumunca uLiquid
Ekamelweni elihlanzekile elinesigaba 100 ~ 1000.
Isetshenziswa kabanzi ku-IC ukuhlangana nokuhlolwa, ukukhiqizwa kwefoni ephathekayo nediski.
Imikhiqizo ye-Optical ne-biotechnology
Usayizi owenzelwe iKhasimende uyatholakala.
Isicelo: Ulayini wokukhiqiza we-Semiconductor, ama-Chips, i-Semiconductor ukuhlangana komugqa, iDiski yedrayivu, izinto ezihlanganisiwe, umkhiqizo wokubonisa we-LCD, Umugqa Wokukhiqiza we-SMT, Izinsimbi Zokucwenga, Igumbi elihlanzekile nomugqa Wokukhiqiza, njll.
Isetshenziswe kulayini wokukhiqizwa kwebhodi lesifunda, idivayisi yezokwelapha, ilensi yekhamera, izinto zokukhanya nezimoto
Idizayinelwe ukuhlanza imishini yezokwelapha, amathuluzi elabhorethri, ingilazi, izindawo ezibucayi nokuhlanza okujwayelekile
Langaphambilini Isisuli seMicrofiber Cleanroom
Olandelayo: I-LCD sula umqulu
I-Esd Cleanroom Wiper
I-Polyester Cleanroom Wiper
I-Sub Microfiber Cleanroom Wiper